Blog - Page 137 of 137 - Suvham News
प्रहरी कारबाहीमा राजेन्द्र महतो घाइते
संयुक्त मधेसी मोर्चा र प्रहरीको झडपका क्रममा मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतो घाइते हुनु भएको छ । उनको टाउको फुटेको र यतिखेर उनीभारतको जोगवनीतर्फ भएका छन् । विराटनगरको रानीस्थित भन्सार नाकालाई मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले आज अपराह्न ४ः१५ बजे धर्नामा बसेर अवरोध गर्न खोज्दा सो झडप भएको हो । प्रहरीले धर्नामा नबस्न सम्झाउने क्रममा मोर्चाका कार्यकर्ताद्वारा ढुङ्गामुढा प्रहार भएपछि अवस्थालाई साम्य पार्न प्रहरीले दुई राउन्ड अश्रुसेल प्रहार गरेका थिए । त्यसपछि मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले सीमापारिबाट ढुङ्गामुढा गरेको र भारतको सीमा सुरक्षा बलले पनि मोर्चाका कार्यकर्तालाई धपाउनका लागि बल प्रयोग गरेका थिए । राजेन्द्र महतोको टाउको फुटेको सम्बन्धमा ढुङ्गामुढाका कारणले वा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको लट्ठी प्रहारबाट भएको हुनसक्ने तर नेपाल प्रहरीबाट नेता महतोमाथि प्रहार नभएको प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रमोद खरेलले बताए । रा
Dec242015 by gsmktmNo Comments
सुरु भयो राष्ट्रिय औद्योगिक मेला–२०१५, ४० स्वदेशी कम्पनीका एक सय पाँच ‘स्टल’ प्रदर्शनीमा
विहीबारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जुत्ता, चप्पल तथा छालाजन्य वस्तुहरूको १२ औं औद्योगिक मेलाको शुभारम्भ भएको छ । सात दिनसम्म चल्ने सो मेलाको भर्खरै उद्योग मन्त्री सोमबहादुर पाण्डेले उद्घाटन गरेका छन् । हरेक वर्ष आयोजना हुने सो मेलामा बढ्दो मात्रामा उपभोक्ताहरूको सहभागिता हुने दाबी गर्दै आएको आयोजक संस्था फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एशोसिएसन अफ नेपालले मेलामा कति उपभोक्ताहरूको सहभागिता हुन्छ भन्ने नै स्पष्ट नभएको बताएको छ । एक हप्तासम्म सञ्चालन हुने सो मेला ‘आत्मनिर्भरताको आधार, स्वदेशी वस्तुको प्रयोग’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरू हुन लागिरहेको सो मेलाको तयारी, उद्देश्य लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर जुत्ता तथा अन्य वस्तुहरूको राष्ट्रिय औद्योगिक मेला–२०१५ का संयोजक मनोज कुमार श्रेष्ठसँग विजनेश संसार डट कमका प्रतिनिधिले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ । मेलाको तयारी कसरी गरीरहनुभएको छ ? नेपाल
Dec222015 by gsmktmNo Comments
ग्यास उद्योगमाथि आक्रमण, स्थिति तनावग्रस्थ
ग्यास वितरण नगरेको भन्दै चाल्नाखेल स्थित एभरेष्ट ग्यास कम्पनीमा तोडफोड भएको छ । मंगलबार ग्यास वितरण गर्ने सहमति भएको र सहमति अनुसार ग्यास वितरण नभएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । ग्यास नपाएपछि स्थानीयले उद्योगमा तोडफेड गरेका हुन् । तोडफोडको घटनालाई नियन्त्रण लिने प्रयासमा प्रहरी र स्थानीयबासीबीच झडप भएको छ । झडपमा परी १० जना प्रहरी घाइते भएका छन् । झडपमा प्रहरी नायब उपरीक्षक रेवती ढकाल, टिकाबहादुर केसी घाइते भएका छन् । नीयले उद्योगमा तोडफोड गरेपछि प्रहरीले केही सेल अश्रुग्यास हानेको छ । स्थानीयले प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेका छन् । स्थानीयले प्रहरीको हतियार र सञ्चार सेट समते लुटेर लगेका छन् ।
कति पैसा छ वन्तसँग ? जति चाहियो दिन्छु भन्दै १० करोड बुझाए
सशस्त्र प्रहरी बलका निवर्तमान महानिरीक्षक कोषराज वन्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई १० करोड धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । अनुसन्धान जारी रहेकै बेला उनले यति मोटो रकम बुझाए । भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेका वन्तलाई अख्तियारले वयानका लागि बोलाएको थियो । वयान नसकिएसम्म उनलाई थुनामा राख्ने र थप अनुसन्धान गर्ने तयारी थियो । तर अख्तियारले थुनामा राख्ने निर्देशन दिन नपाउँदै जति पैसा चाहियो त्यति बुझाउन तयार रहेको भन्दै वन्तले धरौटीमा छुट्ने इच्छा व्यक्त गरे । अनि अख्तियारले माग्यो १० करोड रुपैयाँ । अख्तियारका अधिकारीले प्रचलित कानुन बमोजिम वन्तसँग १० करोड धरौटी मागे । वन्तले उक्त रकम धरौटी बुझाएर बाहिरीएको अख्तियारले जनाएको छ । वन्तले विभिन्न छपाई, मसलन्द, ढुवानी लगायतमा भ्रष्ट्राचार गरेको भन्दै उनी विरुद्ध उजुरी परेका थिए । अख्तियारको पत्रका आधारमा चार दिनअघि सरकारले बहालबाला शसस्त्र
फाइल अड्काएर घुस खाने कर्मचारीको सातो गयो
सर्वसाधारणको फाइल अड्काएर घुस खाने कर्मचारीको सातो उडेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसता कर्मचारीमाथि निगरानी बढाउने र कार्बाही गर्ने बताएपछि यस्तो काममा लाग्ने कर्मचारीको सातो उडेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी कर्मचारीहरुलाई काम नगरेबापत दण्ड गरिने बताएका छन् । सरकारी कर्मचारीहरुले वर्षौंदेखि एउटै फाइल अड्काउने गरेकाले विकास निर्माणका कामले गति नलिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले काम नगर्ने कर्मचारीलाई दण्ड गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म काम नगरेबापत विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारीलाई दण्ड हुँदैन, जसका कारण वर्षौंदेखि एउटै फाइल अड्किएर बसेका छन्,’ व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिमा प्रधानमन्त्रीले भने । ‘अहिलेको सरकारी निकायको काम गराइप्रति प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाए । ‘हामीले हाम्रो काम गर्ने गतिलाई तीब्र बनाउनैपर्छ, यो सरकारले काम ग
आखिर के चाहान्छ मधेसी मोर्चा ? जसले फेरि अस्वीकार गर्यो सरकारको प्रस्ताव
संयुक्त मधेसी मोर्चाले सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिबाट पनि सहमति नहुने भन्दै आन्दोलन गरेरै छाड्ने अड्डी कसेका छन् । मोर्चाको बैठकले सरकारको प्रस्तावले आफ्नो माग सम्बोधन नगर्ने भन्दै आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले यस अघि मधेसलाई मान्य हुनेगरी विभिन्न नयाँ निर्णय गरेको थियो । सरकारको लचकता र निर्णयप्रति भारतले समेत स्वागत गरेको थियो । सोही धारणाबारे निर्णय गर्न मधेसी मोर्चाको बैठक बसेको हो । संघीय समाजवादी फोरम नेपालको कार्यालयमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मधेसी मोर्चाका ११ बुँदे मागलाई सरकारले पहिलोपटक सम्बोधन गरेको भन्दै मोर्चाले सकारात्मक धारणा बनाउँदै आएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।